Nalalka Cad-ceeda ku shaqeeya ee jidka Maka Al-mukarramah oo la Qaxiyey iyo dad ku dhaawacmay – Radio Daljir
Agoosto 1, 2013 3:46 b 0
Muqdisho, July Aug 1, 2013 – Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxay sheegayaan in halkaasi ay ka dheceen qaraxyo lala eegtay biraha ay ku xiran yihiin nalalka Sollar-ka ah ee jidka Maka Al-mukarrama.
2 ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi oo ahaa kuwa lagu tuuray nalalka jidka Maka Al-mukarrama ee magaaladaasi Muqdisho, weerarada ayaa dhacay saaka arroorti hore.
Ciidamada booliska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaaday dhaawacyada kala duwan ee wax ka soo gaareen qaraxa ka dhacay jidkaasi oo ah meel aad u mashquul badan.
?Qaraxyada ayaa sidoo kale bur buriyey labbo ka mid ah nalalka ku shaqeeya Cadceeda, ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa goobta baaritaano ka sameeyey kadib weerarka saaka dhacay.
Laamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya waxay xireen jidadka soo gala Maka Al-mukarrama, waxaana aan ilaa hadda la xaqiijin in cid lo qabtay weerarkaasi, tiro ka dhow jeer oo hore ayaa sidaan loo beegsaday nalalka Cadcadeeda ee Muqdisho.
Wasaarada adeega bulshada DF oo bilowday dhismaha xeer u doodaya xuquuqda haweenka (Dhegeyso)